Yehowa Nkurɔfo ‘Twe Wɔn Ho Fi Nea Ɛnteɛ Ho’ | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Moore Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Ma obiara a ɔbɔ Yehowa din no ntwe ne ho mfi nea ɛnteɛ ho.”—2 TIM. 2:19.
Dɛn na ebetumi akɔfa “nkwasea akyinnyegye” aba, na yɛbɛyɛ dɛn akwati?
Yɛbɛyɛ dɛn akwati fekubɔne na ‘yɛatwe yɛn ho afi neaɛnteɛ ho’?
Dɛn na ɛbɛkyerɛ sɛ yɛasi yɛn adwene pi sɛ ‘yɛbɛtwe yɛn ho afi nea ɛnteɛ ho’ koraa?
1. Dɛn ne ade titiriw baako wɔ yɛn som mu?
SƐ WUHU sɛ wɔakyerɛw edin Yehowa agu dan anaa nneɛma bi ho a, ɛka wo sɛn? Ebia ɛbɛtwe wo ma woagyen w’ani ahwɛ bio. Ɛnyɛ nwonwa, efisɛ yɛn Yehowa Adansefo de, Onyankopɔn din yɛ ade titiriw wɔ yɛn som mu. Wokɔ wiase baabiara a, nnipa biara nni hɔ a wɔde Onyankopɔn din nim wɔn sen Yehowa Adansefo. Ɛwom, ɛyɛ akwannya kɛse sɛ Onyankopɔn din da yɛn so, nanso ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nsow sɛ asɛyɛde bata ho.
2. Esiane sɛ Onyankopɔn din da yɛn so nti, dɛn na ɔhwehwɛ fi yɛn hɔ?
2 Onyankopɔn din kɛkɛ a yɛbɛbɔ no nkyerɛ sɛ yɛwɔ Yehowa anim dom. Ɛsɛ sɛ yɛde yɛn abrabɔ kyerɛ sɛ yenim nea Onyankopɔn pɛ ne nea ɔmpɛ. Enti Bible ka sɛ ‘yɛntwe yɛn ho mfi bɔne ho.’ (Dw. 34:14) Ɔsomafo Paulo kaa no pefee sɛ: “Ma obiara a ɔbɔ Yehowa din no ntwe ne ho mfi nea ɛnteɛ ho.” (Monkenkan 2 Timoteo 2:19.) Obiara nim sɛ Yehowa Adansefo bɔ Onyankopɔn din daa. Ɛnde, yɛbɛyɛ dɛn atwe yɛn ho afi nea ɛnteɛ ho?
‘TWE WO HO’ FI BƆNE HO
3, 4. Dɛn na ɛyɛ den ma animdefo bi sɛ wɔbɛte ase, na dɛn ntia?
3 Paulo kaa “Onyankopɔn fapem a ɛyɛ den” ho asɛm wɔ 2 Timoteo 2:19. Wɔakyerɛw nsɛm mmienu wɔ fapem no so. Asɛm a edi kan no ne, “Yehowa nim wɔn a wɔyɛ ne de.” Paulo yii saa asɛm yi fii Numeri 16:5. (Hwɛ adesua asɛm a edi eyi anim no.) Asɛm a ɛto so mmienu ne, “Ma obiara a ɔbɔ Yehowa din no ntwe ne ho mfi nea ɛnteɛ ho.” Ɛyɛ den ma animdefo bi sɛ wɔbɛte saa asɛm yi ase. Dɛn ntia?
4 Sɛ wohwɛ Paulo asɛm no a, ebia nea ɛbɛba w’adwenem ntɛm ara ne sɛ oyii asɛm no fii Hebri Kyerɛwnsɛm no mu. Nanso asɛm pɔtee biara nni Hebri Kyerɛwnsɛm no mu a ɛne Paulo asɛm no di nsɛ. Ɛnde, dɛn paa na na ɛwɔ Paulo adwenem bere a ɔkae sɛ: “Ma obiara a ɔbɔ Yehowa din no ntwe ne ho mfi nea ɛnteɛ ho” no? Asɛm a Paulo dii kan kae no fi Numeri ti 16, na ɛfa Kora atuatew no ho. Ɛnde, asɛm a ɛto so mmienu no nso fa atuatew koro yi ho anaa?
5-7. Nsɛm bɛn na esii Mose bere so a Paulo tĩĩ ho wɔ 2 Timoteo 2:19? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
5 Bible ka sɛ Eliab mma Datan ne Abiram kɔkaa Kora ho ma wɔtew Mose ne Aaron so atua. Nnipa mmiɛnsa yi na wogye gyinaa mu denneennen sɔre tiaa Mose ne Aaron. (Num. 16:1-5) Wɔamfa nidi ketekete sɛɛ amma Mose sɛ obi a Onyankopɔn ankasa apaw no. Na atuatewfo yi suban betumi asɛe Israelfo a aka no efisɛ na wɔda so te wɔn mu. Nanso ɛnkyɛ-nkyɛ wɔ n’afe. Bere soe sɛ Yehowa keka ne ho ma obiara hu wɔn a wɔyɛ n’asomfo anokwafo ne atuatewfo no, enti ɔde ahyɛde bi mae.
6 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ asafo no sɛ, ‘Mumfi Kora ne Datan ne Abiram ntamadan no ho ntɛm!’ Ɛnna Mose sɔre kɔɔ Datan ne Abiram nkyɛn, na Israel mpanyimfo ne no kɔe. Afei ɔka kyerɛɛ asafo no sɛ: ‘Montwe mo ho mfi nnipa abɔnefo yi ntamadan ho, na mommfa mo nsa nnka wɔn biribiara na wɔampra mo anka wɔn bɔne ho ankɔ.’ Na ntɛm ara wɔtwee wɔn ho fii Kora ne Datan ne Abiram ntamadan ho.” (Num. 16:23-27) Afei Yehowa kunkum atuatewfo no nyinaa. Nanso wɔn a wodii Onyankopɔn nokware no nyaa wɔn ti didii mu. Ɔkwan bɛn so? ‘Wɔtwee wɔn ho fii nea ɛnteɛ ho,’ kyerɛ sɛ wɔtwee wɔn ho fii atuatewfo no ho.
7 Sɛnea yɛadi kan ahu no, Paulo kyerɛw sɛ, “Yehowa nim wɔn a wɔyɛ ne de.” (2 Tim. 2:19) Ɔtwee n’asɛm no fii Numeri ti 16. Enti yebetumi aka sɛ bere a ɔkae sɛ “ma obiara a ɔbɔ Yehowa din no ntwe ne ho mfi nea ɛnteɛ ho” no, asɛm a ɛwɔ Numeri 16:5, 23-27 no na na ɛwɔ n’adwenem. Enti yebetumi aka sɛ nsɛm mmienu yi nyinaa fa Kora ne n’apamfo atuatew no ho. Dɛn na yesua fi mu? Ɛne sɛ Yehowa tumi hu komam. Onim wɔn a wodi no nokware, nanso ɛsɛ sɛ wosi wɔn adwene pi na wɔtwe wɔn ho fi amumɔyɛfo ho.
“PO NKWASEA AKYINNYEGYE A ABA BIARA NNIM”
8. Adɛn nti na Yehowa din a obi bɛbɔ anaa Kristofo asafo no mu a ɔwɔ no ara nnɔɔso?
8 Na Paulo de nsɛm a esisii Mose bere so no rekae Timoteo sɛ onsi n’adwene pi sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara rensɛe ɔne Yehowa ntam. Mose bere so no, sɛ obi bɔ Yehowa din kɛkɛ a, ɛno nkyerɛ sɛ wawie. Saa ara nso na Kristofo asafo no mu a obi wɔ no ara nnɔɔso. Ɛsɛ sɛ obiara a ɔde ne nsa si ne bo sɛ ɔyɛ Yehowa somfo no twe ne ho fi nea ɛnteɛ ho korakora. Dɛn na na eyi kyerɛ ma Timoteo? Dɛn na Yehowa nkurɔfo a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua afi Paulo afotu no mu?
9. “Nkwasea akyinnyegye” kaa tete Kristofo asafo no sɛn?
9 Bible ma yehu nneɛma a ɛnteɛ a ɛsɛ sɛ Kristofo po anaa wɔtwe wɔn ho fi ho. Ɛho nhwɛso wɔ 2 Timoteo ti 2. Ɛhɔ na Paulo ka kyerɛɛ Timoteo sɛ ‘ɛnsɛ sɛ ɔkõ nsɛmfua ho.’ Bio ɔkae sɛ ‘ɔntwe ne ho mfi nsɛnhunu’ ho. (Monkenkan 2 Timoteo 2:14, 16, 23.) Na ebinom de awaefo nkyerɛkyerɛ aba asafo no mu. Afei nso ebia ebinom kekaa nsɛm bi ma ɛkɔfaa akyinnyegye baa anuanom mu. Sɛ nsusuwii a ɛte saa ntia Bible nkyerɛkyerɛ mpo a, na ebetumi de mpaapaemu aba asafo no mu. Enti Paulo kae sɛ Timoteo ‘mpo nkwasea akyinnyegye a aba biara nnim.’
10. Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ wɔ awaefo nkyerɛkyerɛ ho?
10 Ɛnnɛ yɛntaa nhu awaefo wɔ asafo no mu. Nanso ɛtɔ da a yɛbɛte nsɛm anaa nkyerɛkyerɛ bi a ɛne Bible nhyia. Sɛ asɛm no fi asomasi hɔ oo, efi ɔbenten hɔ oo, ɛsɛ sɛ yesi yɛn adwene pi na yɛpo no ntɛm. Enti nyansa nnim sɛ obi ne awaefo bedi nkitaho ɔkwan biara so. Ɛnsɛ sɛ yɛkenkan wɔn nsɛm wɔ nhoma mu anaa Intanɛt so anaa yɛne wɔn yiyi nsɛm ano. Ebia yɛn adwene ne sɛ yɛreboa wɔn, nanso ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ, sɛ yɛne awaefo di nkitaho a, na yɛreyɛ Onyankopɔn so asoɔden. Kyerɛwnsɛm no ka no pen sɛ yɛntwe yɛn ho mfi awaefo ho korakora.
Wo ne awaefo nnyiyi nsɛm ano (Hwɛ nkyekyɛm 10)
11. Dɛn na ebetumi akɔfa “nkwasea akyinnyegye” aba? Dɛn na asafo mu mpanyimfo bɛyɛ de akyerɛ sɛ wɔyɛ nhwɛso pa?
11 Ɛnyɛ awaefo nkyerɛkyerɛ nkutoo na ebetumi de mpaapaemu aba asafo no mu, na mmom nneɛma foforo nso ka ho. Sɛ yɛfa anigyede sɛɛ a, ebia ɛsono adwene a obiara wɔ wɔ ho, enti yɛanhwɛ yiye a ebetumi akɔfa “nkwasea akyinnyegye a aba biara nnim” aba. Ɛwom, sɛ obi de anigyede a ɛto Yehowa mmara bewurawura asafo no mu a, ɛnsɛ sɛ mpanyimfo ka sɛ wɔmpɛ akyinnyegye biara nti wɔbɛtena hɔ ayɛ nhwɛhãã. (Dw. 11:5; Efe. 5:3-5) Nanso ɛsɛ sɛ mpanyimfo hwɛ yiye na wɔamfa wɔn adwene anhyɛ anuanom so. Mmom ɛsɛ sɛ wotie Bible afotusɛm yi: “Monyɛn Onyankopɔn nguankuw a wɔhyɛ mo nsa no, . . . ɛnyɛ sɛ wɔn a wodi Onyankopɔn agyapade so bakoma, na mmom monyɛ nhwɛso mma nguankuw no.”—1 Pet. 5:2, 3; monkenkan 2 Korintofo 1:24.
12, 13. (a) Adwene bɛn na Yehowa Adansefo kura wɔ anigyede ho? Bible afotusɛm bɛn na ɛbɛboa yɛn ma yɛasi gyinae pa? (b) Ɔkwan bɛn so na Bible afotusɛm a yɛaka ho asɛm wɔ nkyekyɛm 12 no fa nsɛm foforo ho?
12 Asafo no nhyɛ da nhwehwɛ sini, video so agodie, nhoma, ne nnwom pɔtee bi mu nhyɛ ho mmara mma anuanom. Adɛn ntia? Bible hyɛ yɛn mu biara nkuran sɛ ɔntete n’adwene na atumi ahu “papa ne bɔne mu nsonsonoe.” (Heb. 5:14) Sɛ Kristoni repɛ nea ɔde begye n’ani a, nsɛm pii wɔ Bible mu a ebetumi aboa no ama wapaw nea ɔpɛ. Biribiara a yɛreyɛ biara no, yɛn adwene nyinaa ne sɛ ‘yɛbɛkɔ so ahwehwɛ mu ahu nea ɛsɔ Awurade ani.’ (Efe. 5:10) Bible ma yehu sɛ abusua ti biara wɔ tumi bi wɔ n’abusua so, enti obetumi akyerɛ sɛ ɔremma kwan mma wɔmfa nneɛma bi nnyigye wɔn ani wɔ fie hɔ. *—1 Kor. 11:3; Efe. 6:1-4.
13 Bible afotusɛm a yɛaka ho asɛm no mfa anigyede nko ara ho. Sɛ yɛhwɛ ntadehyɛ ne ahosiesie, apɔwmuden ne nnuan, ne nneɛma a ɛtete saa a, ɛno nso betumi akɔfa akyinnyegye aba. Enti sɛ nea obi pɛ ntia nea Bible ka a, ɛho nhia sɛ yegye ho akyinnye, efisɛ “ɛnsɛ sɛ Awurade akoa ko, na mmom ɛsɛ sɛ odwo ma nnipa nyinaa.”—2 Tim. 2:24.
14. Mfatoho bɛn na Paulo de kyerɛɛ nea enti a ɛsɛ sɛ yɛkwati fekubɔne?
14 Dɛn bio na wɔn a ‘wɔbɔ Yehowa din’ bɛyɛ de ‘atwe wɔn ho afi nea ɛnteɛ ho’? Ɛne sɛ wɔbɛkwati fekubɔne. Bere a Paulo kaa “Onyankopɔn fapem a ɛyɛ den” ho asɛm wiei no, ɔsan yɛɛ mfatoho foforo. Ɔkae sɛ: “Ofie kɛse mu no, ɛnyɛ sika ne dwetɛ anwenne nko na ɛwom, na mmom nnua ne dɔte de nso wom bi, na wɔde bi yɛ nneɛma a ɛho wɔ nyam na wɔde afoforo yɛ nneɛma a enni anuonyam.” (2 Tim. 2:20, 21) Afei otuu Kristofo fo sɛ ‘wɔntwe wɔn ho’ mfi anwenne a wɔde yɛ “nneɛma a enni anuonyam” ho.
15, 16. Dɛn na yebetumi asua afi “ofie kɛse” ho mfatoho no mu?
15 Paulo mfatoho no kyerɛ sɛn? Paulo de Kristofo asafo no totoo “ofie kɛse” ho, na ɔde asafo no mufo totoo “anwenne” anaa fie nneɛma ho. Wokɔ fie bi mu a, wubehu nneɛma pii wɔ hɔ. Ebi wɔ hɔ a baabi a esi anaa biribi a ɛwom nti, ɛho agu fĩ. Ofiewura no bɛhwɛ paa sɛ ɔremfa eyi mfra nneɛma a ɛho tew te sɛ kyɛnsee a ɔde noa aduan.
16 Saa ara na Yehowa nkurɔfo yɛ nnɛ. Sɛ yɛmpɛ sɛ yɛn ho gu fĩ a, ɛsɛ sɛ yɛtwe yɛn ho fi asafo no mufo a wɔasen wɔn kɔn a wɔmpɛ sɛ wɔde Yehowa afotu yɛ adwuma ho. (Monkenkan 1 Korintofo 15:33.) Sɛ asafo no mu mpo ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye wɔ fekubɔne ho a, ɛnde dɛn na wobɛka afa wɔn a wɔwɔ asafo no akyi ho? Ɛsɛ sɛ ‘yɛdan yɛn ho’ fi wɔn ho, efisɛ wɔn mu pii yɛ ‘sikanibere, awofo so asoɔdenfo; wonni nokware, wɔyɛ dinsɛefo, wɔyɛ keka, wɔmpɛ papa, woyi afoforo ma, na wɔdɔ anigyede sen Onyankopɔn.’—2 Tim. 3:1-5.
MOMMA YENSI PI NA YEHOWA BEHYIRA YƐN
17. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ na Israelfo anokwafo no ani abere sɛ wɔbɛtwe wɔn ho afi nea ɛnteɛ ho?
17 Bere a Yehowa ka kyerɛɛ Israelfo sɛ ‘womfi Kora ne Datan ne Abiram ntamadan ho’ no, Kyerɛwnsɛm no ka sɛ “ntɛm ara wɔtwee wɔn ho.” (Num. 16:24, 27) Wosii wɔn adwene pi, wɔantwentwɛn wɔn nan ase koraa. Bio, Bible ka sɛ “wɔtwee wɔn ho” fii atuatewfo no ho. Wɔma ɛdaa adi pefee sɛ wɔne wɔn nni hwee yɛ. Israelfo anokwafo no amfa nneɛma anni agorɔ; wofi wɔn koma nyinaa mu tiee Yehowa. Wɔkyerɛe sɛ wɔwɔ Yehowa afã, na wɔpoo nea ɛnteɛ. Dɛn na yebetumi asua afi asɛm yi mu?
18. Bere a Paulo ka kyerɛɛ Timoteo sɛ ‘onguan mmerantebere mu akɔnnɔ’ no, dɛn saa na na ɛwɔ n’adwenem?
18 Yɛne Yehowa adamfofa som bo ma yɛn, enti ɛnsɛ sɛ yegyaagyaa yɛn ho ma biribi ketewa bi mpo sɛe no. Ɛsɛ sɛ yesi yɛn adwene pi na yɛtwe yɛn ho fi biribiara a ɛnteɛ ho ntɛm! Biribi saa na na ɛwɔ Paulo adwenem bere a ɔka kyerɛɛ Timoteo sɛ ‘onguan mmerantebere mu akɔnnɔ’ no. (2 Tim. 2:22) Saa bere no na Timoteo yɛ barima mua; ebia na wadi boro mfe 30 mpo. Enti sɛ Bible ka “mmerantebere mu akɔnnɔ” a, ɛnyɛ mmerante ne mmabaa nkutoo na anya asɛm; ɛfa obiara ho. Sɛ akɔnnɔ bɔne regyigye Timoteo a, na ɛsɛ sɛ ‘oguan’ fi ho, kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ‘ɔtwe ne ho fi nea ɛnteɛ ho’ koraa. Biribi saa na na Yesu repɛ akyerɛ bere a ɔkae sɛ: “Sɛ w’ani to wo hintidua a, tu fi hɔ na tow kyene” no. (Mat. 18:9) Ɛsɛ sɛ Kristofo tie afotu yi na wosi wɔn adwene pi na wɔma wɔn ani da hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara rensɛe wɔne Yehowa ntam.
19. Dɛn na ebinom ayɛ na wɔne Yehowa ntam ansɛe?
19 Dɛn na Kristofo bi ayɛ na wɔne Yehowa ntam ansɛe? Ansa na ebinom rebɛyɛ Adansefo no, na wɔn haw kɛse ne nsanom. Seesei a wɔabɛyɛ Kristofo yi, wɔmpɛ sɛ ebi bɛka wɔn ano koraa na akɔfa asɛm aba. Ebinom nso ahu sɛ anigyede bi tumi twetwe wɔn akɔnnɔ ntɛm, enti ‘wɔmpɛ ne tõ, mpɛ ne noa’; wɔatwe wɔn ho afi ho koraa. (Dw. 101:3) Nhwɛso bi ni: Ansa na onua bi rebɛyɛ Ɔdansefo no, na ɔtaa kɔ baabi a nkurɔfo saw yɛ nneɛma a ɛmfata. Nanso efi bere a ohuu nokware no, wagyae asaw koraa; sɛ anuanom mpo na ahyiam a, ɔmpɛ sɛ ɔsaw. ‘Biribi ankɔka papa a, ɛnyɛ kyerɛdɛ’; ɔmpɛ sɛ biribiara de no kɔ n’akyi na ɛkanyan n’akɔnnɔ. Ɛwom, mfomso nnim sɛ Kristofo bɛnom nsa anaa wɔbɛsaw anaa wɔbɛyɛ biribi a ɛnhyɛ da nyɛ bɔne. Nanso ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa si yɛn adwene pi na yɛkwati biribiara a ebetumi asɛe yɛne Yehowa ntam.
20. Ɛnyɛ mmerɛw sɛ ‘yɛbɛtwe yɛn ho afi nea ɛnteɛ ho,’ nanso dɛn na ɛbɛhyɛ yɛn den ma yɛayɛ saa?
20 Ɛyɛ akwannya kɛse sɛ Onyankopɔn din da yɛn so, nanso ɛnsɛ sɛ yɛn werɛ fi sɛ asɛyɛde bata ho. Enti momma ‘yɛntwe yɛn ho mfi bɔne ho’ na yɛmpo biribiara a ɛnteɛ. (Dw. 34:14) Ɛwom, ɛtɔ da a egye animia na obi atumi ayɛ saa. Nanso anigyesɛm ne sɛ Yehowa dɔ wɔn a wɔasi wɔn bo sɛ wɔbɛnantew ne trenee kwan so, na wɔda ne koma so daa, efisɛ ‘wɔyɛ ne dea.’—2 Tim. 2:19; monkenkan 2 Beresosɛm 16:9a.
^ nky. 12 Hwɛ asɛm a wɔato din “Sini ne Nhoma ne Nnwom Bi Wɔ Hɔ a Mobara Anaa?” wɔ jw.org. Wubehu wɔ YƐN HO NSƐM > NSƐM A NKURƆFO TAA BISA afã hɔ.